UTM waxay isku duweysaa Google Earth - Gofumed
Nofeembar, 2007 Cartografia, Downloads, Google Earth / Maps, topografia
Goobta Google ee isku-duwayaasha waxaa loo arki karaa saddex siyaabood:
Heerarka, daqiiqadaha, ilbiriqsi
Heerarka, iyo daqiiqo minimal ah
UTM isuduwid (Universal Traverso de Mercator
Nidaamka tixraaca macluumaadka milatariga
Maqaalkani wuxuu sharxayaa saddex waxyaalood oo ku saabsan ka shaqeynta isku-duwidda UTM ee Google Earth:
1 Sida loo arko UTM isku duwo Google Earth.
2 Sida loo galo UTM isku duwo Google Earth
3 Sida loo galo isku-duwanaashaha badan ee UTM ee Google Earth laga bilaabo Excel
4. Sida loo galo isku-duwaha UTM badan, u fiirso Khariidadaha Google kadibna u soo qaad Google Earth.
1 Sidee u aragtaa UTM isuduwidda Google Earth
Si aad u aragto isku-duwaha UTM, dooro: Qalabka / Fursadaha. Sida lagu muujiyay sawirka, xulashada Universal Traverso de Mercator waxaa lagu soo xulay 3D View tab.
Marka, marka la eegayo xogta, waxaan arki doonaa in qaybta hoose in uu jiro isuduwaha qaabka UTM. Isku-duuduubka la soo bandhigay wuxuu u dhigmaa booska tilmaamaha, maaddaama ay u wareegto dhammaan shaashadda uu isbeddelayo.
Macnaha isdhexgalkaan waa:
16 waa aagga,
P waa shubka,
579,706.89 m waa isku-duwidda X (Easting),
1,341,693.45 m waa isku-duwaha Y (Waqooyi),
N waxaa loola jeedaa in aaggani yahay waqooyiga of the equator.
Sawirkan soo socda ayaa muujinaya aagga 16 iyo dhibicda iskuxirka tusaale ahaan.
Si loo sahlo sawiraadda goobaha UTM ee Google Earth waxaanu diyaarinay faylal, kaas oo aad awoodid ka soo xiriir this link. Waxaa lagu faafiyaa sida Zip, laakiin marka aad iska furto waxaad arki doontaa faylka kmz ee la furi karo Google Earth oo kuu ogolaanaya inaad aqoonsato degaanka UTM, sida lagu muujiyay sawirka soo socda. Waxaa ka mid ah meelaha UTM ee qaarada Mareykanka, Spain iyo Portugal.
2 Sida loo galo UTM isku duwo Google Earth.
Haddii aan rabno waa in aan galno isku-duwaha UTM, ka dibna waxaan ku sameynaa habkan soo socda:
Qalabka "ku dar meesha" ayaa la isticmaalayaa. Kani wuxuu muujinayaa guddi muujinaya iskuduwaha qaabka UTM. Haddii aad jiidid meesha lagu meeleeyay, waxay si otomaatig ah u beddeleysaa isku-duwaha. Haddii aan naqaanno isku-duwaha, ka dib ayaan wax uun ku beddeleynaa qaab ahaan, annagoo muujineya aagga iyo iskuduwaha; markaad dooraneyso batoonka aqbalida, dhibicdu waxay ku jiri doontaa booska aan tilmaanay.
Google ma laha shaqeyn taas oo iskudhafyada badan ee UTM lagu qori karo. Hubi su'aashaada waa:
Waad ku mahadsantihiin macluumaadka, laakiin sidee ayaan u galaa isku-xireyaasha?
3. Sida loo galo isku-duwanaashaha badan ee Google Earth miiska miiska.
Tallaabada 1. Soo rog qaab-raaca macluumaadka quudinta. Si aad u isticmaasho tusaalihii aan ku muujinnay sawirada aad kartid Download template this.
Tallaabada 4. Ka soo qaad khariidada Kml.
Waxaad gelisaa code download kadibna waxaad haysataa feyl aad ka arki karto Google Earth; codsiga wuxuu muujinayaa halka laga helo si aad u heshid code download kaas oo aad ka dhigi karto xawaaraha ilaa 400, iyada oo aan jirin xaddidaad ku saabsan inta ay le'eg tahay waxaa laga yaabaa in download kasta oo la isticmaalayo gTools API. Khariidadda kaliya waxay muujinaysaa iskudhafyada Gooogle Earth, iyada oo fikradaha moodooyinka saddexda cabbir ah la hawlgeliyo.
4. Fursad in lagu galo isku duubnooyin badan oo UTM ah ee Google Earth toos ah laga bilaabo Excel
Haddii aan rabno waa inaan galno isku-xireyaasha UTM ee aan ku heyno faylka Excel, ka dibna waxaan ku qasbanaan doonnaa qalab dheeraad ah.
Qalabkan waxaad ku qortaa: magaca xayawaanka, iskudhafka, aagga, qaybta dhexe iyo sharaxaad. Qaybta saxda ah waxaad ku dareysaa waddada aad ku kaydin doonto faylka iyo faahfaahinta.
Markaad riixdo batoonka "Abuur KML", feyl ayaa lagu keydin doonaa dariiqa aad qeexday. Shaxanka soo socdaa wuxuu muujinayaa sida liiska isuduwidda loo soo bandhigo. Faylka waa in lagu muujiyaa sidan.
Si aad u heshid template aan lahayn xaddidaad, waxaad ku heli kartaa Lacagta biilasha ama kaarka deynka ee ku yaal boggan.
Marka aad bixiso lacag bixinta waxaad heli doontaa email ah oo tilmaamaya jidka gadaashiisa.
Fikrad ahaan, waa in la dhigo waddo ku taal D, kaas oo leh xaddidaad ka yar inta uu yahay qoynta C. Caadi ahaan:
Tirada dhibcaha aad u badali doonto waxay ka badan tahay dhibcaha 400.
Ku qor taageerada, si aad ugu suurtagasho qaab-dhismeedkaaga.
Haddii aad qabto su'aalo kale, u qor boostada email@geofumadas.com. Had iyo jeer sheeg tilmaamaha daaqadaha aad isticmaalayso.
Post Previous«Previous Earth Virtual images cusub (Nov 07)
Post Next Pro in images GoogleEarth leeyihiin xal ka wanaagsan?Next »
90 Waxay u jawaabaan "Isku-duwaha UTM ee Google Earth"
Pablo Sebastian isagu wuxuu leeyahay:
Maarso, 2020 at
Salaan Ma ii sheegi kartaa haddii uu jiro barnaamij halkaas oo uu meridian-ka loo yaqaan 'Greenwich meridian' ka beddeli karo goobtiisa, tusaale ahaan, inuu ka gudbo Senegal ama meel kasta oo Dunida ka jirta?
Aan aragno, waxaa jira dhowr geesood oo la qaato.
1 Maskaxda ku hay in noqoshada biraawsar garmin ay leedahay saxsanaan inta u dhaxaysa 3 iyo 5 mitir meelkasta oo aad qaadato.
2 Sawirrada Google dhulka looma sharciyeeyo marka laga hadlayo soosaarista. Marka waxay u muuqdaan inay barakacaan mararka qaar ilaa mitir 30.
3 Haddii aad u guuri doontid Arcgis, waxaad ka imaanaysaa oo keliya barnaamijka. Xogtaada GPS-ka way ka aamin badantahay waxaad haysan karto adoo wata sawirka Google Earth. Haddii aad rabto inaad aragto haddii ay isku waafaqsan yihiin muuqaal, waa inay noqotaa il kale, oo aan ahayn google earth.
Hello, waxaan leeyahay dhibco la helay Garmin GPS laakiin markaad u guurto dhulka waxaa ku yaal dhowr mitir oo sare halkaasoo ay tahay inay sawiradu noqoto, iyada oo codsiyada garmin ay dhibaato ku qabaan.
Sidee ayay dhibaatadani u dhacday si ay u gudbiso xogta loo yaqaan 'argis'?
Isku day in aad furtid faylka kml oo leh excel ama tifaftiraha qoraalka si loo xaqiijiyo haddii wareega tirooyinka muuqaalka kaliya ee muuqaalka Google Earth ama sidoo kale uu ku jiro faylka.
Waxa kale oo lagama maarmaan ah in la arko haddii ay taasi samayn karto barnaamijka von oo aad u beddeshay iskudhacyada kml.
Diego Villarroel isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan dhibaato ka qabto google dhulka pro, waa in ay ku shuban oo dhan dhibcood ka qayb geliya qaadan isticmaalaya GPS a ...... isuduwaha ee qodob kasta ayaa tobanle (UTM) laakiin markii galaya barnaamijka mar kale Google Earth tobanlayaasha, kuwaas oo lagu soo koobay in eber sidii aan u soo noqoteen?
HERNAN TORRES isagu wuxuu leeyahay:
Dhibaatadaydu waxay la jirtaa Google Earth Pro, ma aqbalo shahaadooyinka iskudhafka, daqiiqadaha, ilbiriqsi. Mar kasta oo aan soo bandhigo iyaga
halyeey ayaa u muuqda mid muujinaya "WAA IN AANAN FARSAMINNAHAN LAYDHAN", oo ay la socdaan iskuduwaha iskudhafka, jajab tobanle wax dhib ah maleh. Waad ku mahadsan tahay kaalmadaada.
Sida aan u tilmaamay. Sawirada Google Earth ma aha mid lagu kalsoonaan karo marka la isku daro.
Waxay ka dhigan tahay in heer qaraabo ah, inay aad u wanaagsan yihiin. Kiis ahaan waxaad ku sameysay RTK, oo aan fahamsanahay inaad dhigtay jago ku saleysan sawirka. Heerka qaraabada si fiican ayey u shaqeyn doontaa.
Hase yeeshee, heerka abosluto, sawirada ma aha mid lagu kalsoon yahay iyada oo ku saleysan dhibcooyinka la qaaday gps sax ah.
Waxaan kugula talinaynaa inaad eegto maqaalkan meesha aan ku tusinayno waxa ka dhacaya aagagga munaasabka ah ee sawirada.
Fredy Javier isagu wuxuu leeyahay:
Salaan aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin faallooyinkaaga dhibaatada ayaa ah markii aan saxo asal ahaan la aasaasay iskuduwayaashu way i beddelaan ka dib markii sixitaankaas ay sifiican u muuqdaan sawirka marka laga reebo taas oo aan ku qaatay dhowr qodob oo leh rtk oo aan lahayn kontarool iyo in isku-duweyaashu ay si fiican u soo baxaan Marka laga hadlayo muuqaalka qaladka waxaan kaliya ku arkaa qodobbada xariiqda leh mahadsanid
Hi Fredy. Runtii qodobbadaadu way wanaagsan yihiin; Guud ahaan, sawirrada Google Earth waxaa loo wareejiyay inta u dhexeysa mitirrada 15 iyo 30. Waad ka hubin kartaa in isku-darka meelaha u dhexeeya sawirrada tallaallada kaladuwan.
Saludos Fadlan ka hadlo arrin q la ii soo bandhigay leeyihiin sokkia GPS grx2 markii aan jidka guurto ah ku riday labo dhibcood gacanta waxaan ku samayn ku-processing post iyo dakhliga isuduwaha inay dhibcood Google eart ii soo barakacay 10 tago si 20 mitir marka la eego images ma ka mid ah Google ogaado haddii ay tahay xun ama GPS ka dhacaya mahad comments aad.
Good Waxaan doonayaa in aan ogaado haddii ay jirto cid i siin kartaa comment ku saabsan a sokkia GPS grx2 marka waxaan doonayaa in aan meel laba dhibcood gacanta ku guurto ah oo ka dhigi-processing post by galaya ay wadataa ah ee processing post si eart Google ayaan ka heli dhibcood barakacday marka la eego barakac image socdaaye qiyaastii 19 in 20 mitir baadi
iyo haddii aanay ka iman aaggaas, xaggee ayaad rabtaa inaad bedesho?
Fadlan haddii qofba i caawimi karo waxaan qabaa 22499.84 iyo isuduwidda 8001.61 bariiska, iskudhafyadaas waxay u dhigmaan piezometer. waxaa la aaminsan yahay in kuwani ay tahay inay waafaqsan yihiin Zone 17 S - Peru, laakiin tani ma aha sida aan u bedelo meeshii ay
Gerardo Rojas Sayago isagu wuxuu leeyahay:
Fiidnimo wanaagsan, waan ka mahadcelinayaa cidda i caawin karta, waxaan hayaa laba dhibcood oo aan ka helay GPS garmin waa: 975815 iyo 1241977, qodobka kale waa 975044 iyo 1241754, sidee baan u gali karaa si aan u idhaahdo sida xargaha laga arki karo Google Earth ay ahaan laheyd Google Earth. Aagga waa Panama de Arauca Colombia aagga 19 N wuxuu ku soo baxayaa dhulka Google Waxaan isticmaalaa saadaasha Transverse Mercato datum sirgas 2000 oo leh isbarbardhigyada CENTRAL MERIDIANO: -71.0775079167 latitude 4.5962004167, this 1000000 north 1000000
Waan ka mahadnaqayaa cidda ii tilmaami karta sida aan ugu matalayo koogle google ama sharraxi lahaa qaabka ama aan horeba aniga iiga siin karo iskuduwaha google. Waan u mahadcelin doonaa
Waa astaanta ugu muhiimsan ee Google Earth, version desktop.
Maqaalkani wuxuu tusayaa tusaale
Juan Alberto ZambranoLoor isagu wuxuu leeyahay:
Salaan sida aan u qeexi karo sawirada dayax-gacmeedka ee sannado kahor ee dhulka google.
Waad ku mahadsantahay horay!
tay isagu wuxuu leeyahay:
on MAC ma soo baxaan ikhtiyaarka
javier perez isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u maleynayaa inaan horay u helay wixii aan raadinayay, Xirmooyinka 81 ee miinooyinka
Enrique Rabajille isagu wuxuu leeyahay:
Galab wanaagsan, wax dhib ah waxaan jeclaan lahaa hadii aad iga caawin kara, waxaan idinka soo kaxaystay wadataa Google Earth (waxaan fahmay in ay yihiin 84 WGS) iyo waxaan u baahan tahay inaad beddesho 56 psad in aan ku talinayaa, waxay ku Shukrin Eebe.
Erika Yojana Morales isagu wuxuu leeyahay:
Galab wanaagsan in ay qaataan billabo ah in google eart lagama maarmaan ah in ay leeyihiin 3d rayidka ah, iyadoo KML dhoofinta waa isku mid KMZ la format in ka qabtaa eart google, oo download barnaamijka mappers caalamiga ah, si fudud u gelin amarka billabo faylka.
Waxaan qabaa su'aal sababta oo ah haddii xargaha xargaha gurigeygu ay yihiin 104 e iyo 95 n, google eart waxay kasoo muuqdaan 65 e iyo 45 n… Ma fahmi karo…. Waxaan rabaa inaan badalo feyl Kolombiya marwalbana way i tuurtaa taasina waa sababta aan u habeynaayo labada faylasha ee noqon kara qaladka uu ku leeyahay Google eart.
Isku-duwayaasha aad soo xushay ma ahan mid ku kala duwan adduunka oo dhan. Waxaa dib loo hagaajiyaa 60 jeer waqooyiga hemisphere iyo 60 times ee hemisphere koonfurta, 2 times mid kasta oo ka mid ah aagagga UTM.
Si ay u awoodaan inay u matalaan, waa inaad taqaanaa meesha ay ka tirsanyihiin, maadaama aysan ahayn juquraafi ah laakiin la saadaalinayo.
Luis tapia isagu wuxuu leeyahay:
Hello. qof ayaa iga caawimi kara inaan isku duwo isku-duwayaasha si aan ugu guuro juqraafi
tusaale ahaan waxaan haystaa: 836631 x
Waxaan u baahanahay inaan ku dhajiyo dhulka google
laakiin gps kasta oo aad isticmaasho kuma siin doono meesha saxda ah ee dareenkaaga ilaa tan gps aysan shaqeynin waqtiga dhabta ah waxaadna yeelan doontaa qalad qiyaas ah oo mitirka 15
Hi waan ku cusub this wanaagsan u bilaabo, anigu waxaan ahay naqshadeeye korontada ahay, waxaan kaliya laga bilaabo si ay u isticmaalaan,,, waxaana ku shaqada on rakibidda khadadka danab dhexdhexaad ah, la xiriir khadka awood qaybiyaha ayaa ii sheegayaa in dhibic xiriir ay noo waxaan ku xirmaan waxaa cirif ah, ku yaal UTM isuduwaha North 6183487, 288753 Datum Tani WGS84, H18, si fiican ii soo sheeg sida loo geli xogta this galay Google Earth in ay gaaraan view map-ka, salaan ka Chile.
Waxay ku xiran tahay habka qalabka.
Haddii aad macnaheedu tahay gawaarida nooca eTrex-ga ah ee saxda ah waxay ku socotaa shaxdan ka socota 3 ilaa mitirka 6.
Qalabka kale ee Garmin waa sax.
Francisco Aguilar isagu wuxuu leeyahay:
Iskuduwaha UTM ee la qaaday GPS Garmi waa la isku halayn karaa ama halkii, waxaa jira kalsooni lagu kalsoonaan karo oo leh GPS-ga.
Mareekanka raajada cagaaran isagu wuxuu leeyahay:
waa mawduuc aad u xiiso badan waana mid waxtar leh
Waxay u adeegtaa dhammaan browserka (GPS), gaar ahaan waxaan doorbidaa GARMIN
Waxaan jeclaan lahaa in aan ogaado nooca qalabka ee muuqaalka jireed uu calaamadeeyn karo isku-duubnaanta macaamilka ah ee aan ku leeyahay cadastre ee qaab-dhismeed gaar ah iyo xajmiga.
Taasi ma fududa in la go'aamiyo.
Waxaad ka arki kartaa wadamada qaarkood, halkaasoo gobolka uu sawirrada Google ku siiyey, taas oo u dhiganta.
Jose G isagu wuxuu leeyahay:
Waan sharxi karaa haddii sawirrada Gopgle ay ku barokaceen, si ula kac ah loo qabtay ama waxaa jira hab lagu saxo.
Google Earth wuxuu isticmaalaa WGS84 sida Datum.
Si aad uhesho macluumaadkaaga waa inaad la shaqeysaa isla Tilmaamaha AutoCAD.
Sawirrada Google Earth sidoo kale way barakaceen, marka xitaa haddii isku duwaha uu isku mid yahay, waxaad heli doontaa barakac. In kasta oo masaafada aad sheegto hubaal tahay sababta oo ah waxaad isticmaaleysaa Datum kale.
mxm isagu wuxuu leeyahay:
Saalaxoow! Waxaan jeclaan lahaa inaan weydiiyo su'aal u muuqan kara caqli gal adiga. Autocad I georeference muuqaal (jgp) oo leh shey aan isticmaalo oo la yiraahdo "GeoRefImg», sifiican, marka sawirka si fiican loo dhigo goobta Autocad waxaan qaataa dhibic madhan waxaanan diyaar garoobaa iskuduwayaasha (x, y) ka dibna waan Google Earth iyo anigu waxaan galnaa iskuduwayadan qaabka UTM laakiin ma dhigno barta ku habboon meesha saxda ah ee leh kaladuwanaanshaha u dhexeeya 150 iyo 200m. Maxaa ka dhalan kara? Xogta ay adeegsato Autocad ma lamid tahay tan loo yaqaan 'Google Earth'? Mise waa khaladka Google Earth?
Google Earth ma hayo nooc caynkaas ah.
Waa inaad soo saartaa barnaamijka GIS oo u dhoofiya KML.
Jan maqaalkani wuxuu sharxayaa sida looga soo saari karo Manifold GIS, laakiin halkii aad ka abuuri lahayd buundada ku saleysan darajooyinka, waxaad ku sameyneysaa masaafada mitirka. Markaas juqraafi ahaan loo dhoofiyo oo loo dhoofiyo kml
Juraci isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan ubaahanahay caawimo:
Waxaan gelin UTM duwo Roobka dhulka google, laakiin waxaan u baahan tahay q waa gridlines kilomentro ah, maxaa yeelay, waan rabto in aad isticmaasho si ay u dhig Earth. Shabakada soo baxday aniga uma shaqeyneyso. Tani ma la samayn karaa ama ma inaan raadiyaa habab kale? Su'aal ma ku talinaysaa?
Marka hore, Google Earth waxay isticmaashaa WGS84.
Markaa, waa inaad xasuusnaato in sawirrada google ay leeyihiin barokac, oo aan labis lahayn oo aad ku arki karto kala-goysyada ka dhexeeya dhexdooda. Qaab kale oo loo tijaabiyo waa in la sawiro dhisme, ka dib la dhaqaajiyo lakab kale oo sanadle ah oo leh taariikhihii uu Google lahaa waadna arki doontaa inaysan u dhigmin.
Pikoh isagu wuxuu leeyahay:
Hada, waan ka xumahay dhacdada, laakiin anigu waan waalanayaa, ma haysto fikrad aad u badan oo ah kartoonka iyo waxaan ku jiraa wadada ugu dambeysa ee dhimatay.
Waxaan isku dayayaa inaan meel kale ka istaago meelaha basaska google-ka ah. Anigu waxaan isku-duwaha ku hayaa, laakiin ma aanan awoodin in aan ogaado waxa ellipsoid uu isticmaalo. In the case of Spain, waxaan isku dayay ED50 iyo ETRS89, laakiin marka aad badalo wadataa dhigaha / loolka ah, joogsiga mowjadda waa mid aad u ballaaran, ugu yaraan 100 mitir haddii aan ka. Miyuu suurtogal ah inaadan isticmaaleynin saxda saxda ah? Miyaa Khariidadaha Khariidadaha Google? Ma jirtaa qaab kasta oo lagu saxo ciribtaas?
Thanks waxaanan rajeynayaa inaad i siisid calaamad muujinaysa meeshii aad tagi lahayd
hureen Waxaan ahay, sida aan dhoofin karo isuduwaha AAN Excel GPS GARMIN 60C A ??, IYO WAXAY LEEYIHIIN in MapSource Waypoints iyo Google Earth istaagay Laakiin sidii aan nuqul ?? ayudaa
Hi Pablo, ka xumahay dhibaatada.
Waxaan kuu soo dirnay template.
Pablo Cruz isagu wuxuu leeyahay:
Dhibaato ayaan ku haystaa qaab-dhismeed sare si aan u bedelo UTM iyo Geograficas
Waxaan ka bixiyay Pay Pal iyo markii aan furo xiriirka loo soo diray emailkaygu wuxuu igu siinayaa qalad
Waxaad awoodi kari, in AutoCAD waxaad isticmaali kartaa oo kaliya UTM WGS84
sumadda isagu wuxuu leeyahay:
Marka aan arko isuduwaha Waqooyi Bari, iyo UTM PSAD 56
Codsiga aad u gudbisay waxaa la sameeyey mudo ah oo hore u dhacday.
Mid ka mid ah doorashadu waa in la isticmaalo Digipoints, wuxuu ka shaqeeyaa internetka, waxaad geli kartaa isku-duwidda macaamilka ka dibna dhoofisaa kml si aad u aragto Google Earth
March isagu wuxuu leeyahay:
Hello, raalli ahow, Waxaan akhriyay bogga oo isku day hoos codsiga in recomendabas marayay wadataa UTM luuqeeyo dhulka google, laakiin marnaba ma ku rakibi laga yaabaa in barnaamijka PQ Had iyo jeer u maleeyeen qeu dhacay, waxaan arkaa in update ee la soo dhaafay ahayd 2007-08, hadda waxaa jira qaar ka mid ah codsiga cusub si aad u hesho UTM isuduwaha in Google Earth in ay helaan iyo dhulkayaguba?. Waxaan kuugu mahad naqayaa dhammaan hanuuninta.
Waa inaad u beddeshaa isku-duwaha UTM si ay isku-duwaan juquraafi ahaan.
Taas awgeed, waxaan kugula talinayaa eQuery, qalab online ah oo kuu ogolaanaya inaad beddesho liisaska UTM ee tilmaamaya joqraafiga.
Ka dibna Google Earth waxaad ku arki kartaa iskudhafyadaas adigoo ku qoraya sawirka ama furida faylka kiiska
ECO isagu wuxuu leeyahay:
Hello «g», macluumaad aad u xiiso badan, si kastaba ha noqotee waxaan ku helay xaalad ah inaan haysto isku-duwayaasha UTM «X» «Y» mana garan karo ama garan maayo, sida loo helo khariidada dhulka, Waan ku mahadnaqayaa haddii aad i caawin karto
Waxaan u baahanahay inaan qorshayaasha polygons ku wareejiyo wadnaha google fadlan i ogeysii
Hi Ana, waxaa jira barnaamijyo loogu talagalay waxaad rabto, oo badanaa loo yaqaanno geocoding. Laakiin badanaa waxay kuxirantahay qaab dhismeedka cinwaanada.
Haddii aad na tusisid tusaalooyin dhowr ah, waan arki karnaa.
Hola¡ xiiso ii badalo cinwaanada in ay wadataa (x, y) iyo waxaan uga hadashay in Google Earth ee i siin kartaa. Waxaan u baahan tahay inaad ku darsato liiska macaamiisha u leeyihiin in ay ka jaftaa meel gaar ah. Barnaamijku waa meesha aad ka gali doonaa MapInfo, Google Earth baahan tahay inaad ogaato haddii aan helo macluumaad ama haddii ay jirto Converter kasta oo i siin kartaa wadataa meel, haddii kaliya oo aan leeyahay cinwaanka.
Waxaan rajeynayaa inaan si fiican u sharaxay. iyo rajeynayaa inaad i caawin karto
Waa iska caadi in la kala duwanaado. Moodeelka dijitaalka ah ee Google Earth ayaa si aad ah loo fududeeyay, iyo markii loo beddelayo AutoCAD inta u dhaxaysa saddex-xagalka iyo shaandhaynta waxaa jira dhibco la sameeyay celcelis ahaan isku darka.
Waxaan haystaa dhibaato, marka dhoofinta muuqaalka iyo dusha laga saaro dhulka google-ga ah ee loo yaqaan 'autocad civil rights' 2010, heerarka sare ee aan u dhexeeyo dusha sare ee autocad iyo kor u qaadka lagu muujiyo dhulka google ayaa kala duwan. Sideen u xalliyaa dhibaatadan?
Waxaad si dhab ah ugu dhexjirta ugu yaraan laba dhibcood oo sahlan, sidaas darteed waxaad raadin kartaa joornaalkaaga xaglaha.
Marka la eego dhibcaha ugu horeeya ee UTM waxaad leedahay meel aad u guurto, halka labaadna aad jajabiso sababtoo ah tilmaamaha diyaaraddaada waxaa laga yaabaa inay la xidhiidho waqooyi iyo magaalo aan lahayn.
Haddii taasi ay tahay shaqo rasmi ah, GPS-kaaga ma noqon doono mid wax tar leh maxaa yeelay saxnaanta radial-ka dhibic kasta waa laga bilaabo 3 illaa 6 mitir. Boondhigaaga ayaa ku yaraan doona ama ka yaraan doona meesha, iyo waxoogaa wareejin ah, laakiin ugu yaraan waxaad arki kartaa meel u dhow halka lagu muujiyey Google Earth.
Sawirrada Google Earth uma faa iido badanyihiin juqraafi ahaan maxaa yeelay badiyaa waxay leeyihiin barakac. Marka cabirka GPS-gaagu waa mid la isku halleyn karo.
Ciro El Bagual isagu wuxuu leeyahay:
Waan ka xumahay, sifiican ayaan u sharaxnaa (tan tan waxaa laga sameeyay alwaax, wax yar oo aan ogahayna waa tijaabo iyo qalad) .. Waxaan haystaa qorshe oo waxaan rabaa inaan ku dhex helo dhulka google. xogta ku qoran diyaaradda waxay leedahay tixraacyo kan la mid ah, tixraac ayaa lagu qoray khad kasta (Ma lihi qorshooyinka hadda ila jira) ee dhaha tusaale ahaan: SW 55 ° 43'24 »oo leh 1.245m, iyo wixii la mid ah midkasta oo kamid ah Khadadka Dhibaatadayda ayaa ah inaan haysto fikrad aan kala caddayn meesha ay ku taal, laakiin aan ahayn sida saxda ah ee ay yihiin baraha polygonku. Waxaan rabaa inaan ku helo google, sababtoo ah waan ogahay aagga (waxay la mid yihiin sida 2500 uu leeyahay). laakiin ma haysto meel aan ka bilowno, xitaa xiitaa cinwaanka.
Miyaan si sax ah u heli karaa dusha sare ee khariidada adoo haysta xogtaas? ama ma haysatid uun barta bilawga ah?
Miyaan sameeyn karaa xariiqyada lakabka wadada jidka google? si ay u yeeshaan tixraac sax ah oo ku saabsan jidadka gelitaanka?
Miyaan kala saari karaa UTM-yada marka la eegayo isgoysyada kala duwan ee koorsooyinka?
Waad ku mahadsantahay wax aad u badan, waan ka xumahay in la'aanta macluumaad kale, laakiin mar labaad ma fahmin wax badan oo ku saabsan mawduuca. Waxaan haystaa Garmin Vista GPS.
Ciro Venialgo - Soo saaraha.
Waa hagaag, haddii ay iyagu yihiin, ka dibna, meel kasta oo aad asal ahaan ka soo qaadatid, ka dibna ku qor foomka:
guji, mar kasta
Waxaan jeclaan lahaa inaan ogaado haddii aan helli karo polygon leh kaliya xogta masaafada ah ee sidda,, tusaale ahaan cinwaanka NW 35 ° 25 ′ 33 ″ CO 1200 m ... iyo wixii la mid ah oo leh xog kale. Dhibaatada aan helay waa inaanan lahayn meel bilow ama bilaw waxaan guud ahaan u maleynayaa inay yihiin UTM o ° 'iyo' laakiin tusaale ahaan: N 65 ° 34 '27 ″.
tixraaca dukumiintiga aan ku leeyahay dhammaantood oo leh xogta SW SW SE ama wax kasta .. mahadsanid ..
Waa maxay barnaamijka aad leedahay?
Haddii aad leedahay AutoCAD, waxa aad sameyneyso waa:
kadibna qor isku-duwaha koowaad ee foomka xxxx, yyyy
waxaad u qortaa xxxx xiriiriyaha soo socda, yyyy
oo sidaas ayaad u dhisi doontaa garbahaaga
pako isagu wuxuu leeyahay:
sida aan awoodo, mashruucaan garaan, waxaan haystaa isku-duwidda macaashka laakiin ma mashquulin karo, waxay ku waydiisaneysaa darajooyinka waxaanan haystaa isku-duubnaanta mowqifka, waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto
fadlan, sidee ayaan u soo degsan karaa Google Earth si aan u yeesho isku-duwaha UTM-ka magaaladayda ...
Waxaan ubaahanahay in aan u codeeyo miis fadhiya dad rayid ah oo tilmaamaya isku-duwayaasha garbaha ama isku-xirnaanta
Hada, Waxaan isku dayayaa in aan isticmaalo epoleXPUMP macro macquul ah, laakiin waxay ii sheegaysaa in beta horay u dhimatay q Waa inaad ka heshaa version kale bogga, hadda bogga 2 aan la heli karin
Terela isagu wuxuu leeyahay:
Hello, ma haddii aan caawin kara aan shaqo qabanayo iyo waxaan u leeyihiin in ay meel dhibcood ururinta on map a iyo GPS isuduwaha leeyihiin in daqiiqo, segundos..ahora sidii aan mari wadataa, kuwaas oo barnaamijka dhulka google ii oq waxaad ku talineysaa
Fanny isagu wuxuu leeyahay:
Haa, maya maya wax su'aal ah oo aan halkan ku arko, laakiin waxaan rajeynayaa inaad i caawin karto. Waxaan u baahanahay inaan ogaado sida aan u bedelayo iskuxirka UTM ee PSAD 56 ilaa WGS84, tan iyo markii aan isku duwo Datum kowaad waxaanan rabaa inaan ku sawirto Google Google oo aan fahamsanahay isticmaalka qoraalka kale.
Waxaan rabaa inaan si gaar ah u arko sawirada maxaa yeelay waxaan si gooni gooni ah uga tagnay sawirada 3 sawirada seddex meelood oo dunida ah iyo isuduwayaashooda uma arki karo muuqaal liita oo loo kala qaaday sida sawir mahadsanid si aan u arko haddii ay i caawiyaan waxaan ahay arday of topography of Arequipa Peru
Jaantuska bilaashka ah | isagu wuxuu leeyahay:
Subax wanaagsan! Waxaan ahay arday ka tirsan Maamulka Maareynta Deegaanka ee PFG ee Jaamacadda Bolivaria ee Venezuela. Google Earht waa barnaamij wanaagsan oo lagu helo goob kasta, laakiin waxaad u baahan tahay inaad cusbooneysiiso, isbeddelada iyo wax ka bedelka ka dhacaya meeraha. Sawirada soo muuqda waa kuwo aad u caawiya laakiin hadda kuma sii socdaan. Tani waxay ku dhacdaa Webiyaasha oo isbedelo ba'an ku socda. Kaliya soojeedin Waad ku mahadsan tahay ..!
wanaagsan, waan ku faraxsanahay ... oo waxaan soo dhaweynayaa adduunka farsamada
ARQ. GUSTAVO FERNANDEZ isagu wuxuu leeyahay:
Qabtaan imtixaan. Terramodel Trimble keentaa Converter duwo nidaamyada iyo converti of nad27 in nad 83 dhacay iyo in la hagaajiyo meesha uu hore in aad ku shuban in this herror waa hal dhinac oo ka mid ah 35mts xuduud iyo guud ahaan soohdinta reer 50mts. via oo dhan ma barnaamijka iyo waxaan aqbali wgs84 ku geoid. haddii ay keentaa laakiin ma sii dayn doonaa i doortaan.
si aan kuugu soo koobo xisaabaadyada la soo koobay waxaan u shaqeeyay waxaad u sheegto mahadsanid.
In shirkadda anigu waan shaqayn annagu waxaan uun nahay total saldhigga, iyo marka shaqada mararka qaarkood macmiilka ina siinaysaa baadhitaan qaab dhismeedka sameeyo GPS iyo haddii ay taasi iman mayso macluumaad Jooloojiyadda buuxda, waxaan ula jeedaa haddii ay nad27 ama in si revizarlo. Tani waa ujeeddooyinka daraasad shakhsi ahaaneed iyo inay fahmaan waxa google. Hantida su'aasha ku jirta ayaa horeyba loo dejiyey xargaha. kaliya in ay lumeen waa in aan ogaano meesha ay ka heleen isku-duulimaadyada.
runta ayaa ah inaan sii wadi doono sahaminta fursadaha google iyo isugeyn kale iyo boggan aan jeclahay. Waxaan kuugu mahadcelinayaa jawaabtaada degdegga ah. Waan sii wadi doonaa inaan ka qayb qaato.
sababtoo ah waxa saxda ah waa gps aad, sawirada google sida caadiga ah waxay leeyihiin waxyaabo aan fiicneyn oo ku socdo mitirka 30 ama ka badan.
kiiskaaga aniga oo ah mitir ku filan xNUMX, waxay noqon kartaa in la kiciyey qadar kale, tusaale ahaan nad200 iyo kuwa google waa wgs27
Salaan iyo Aad ayaad u mahadsantahay for habka, waxay ahayd mid xiiso leh oo ku guulaysto gelinayn geesoolayaasha ah guri, laakiin shaki ku jiro, sida sax ah loo sameeyaa, AMI aan ka baxay a mitir wajiga 200 wareejin koonfureed? Hadda waxaan isku dayi karaa dhibcooyinka terramodel iyo u guurto si ay u muuqato laakiin ma ogi waxa dhacaya? Ma noqon doonto mid dhab ah google, ama gps kuwaas oo ay qabteen sahanku ma aha sidaas oo kale?
Waad ku mahadsantihiin inaad i hagaajisid, waxaan ku buuxsamayaa google iyo adeegyadeeda adeegyadeeda 3d.
IMPORTO 3D A RAYIDKA IYO DEEGAANKA EE IMAGE GOOGLE dusha AN IN REAL contours Prendo dunida wiishashka iyo NIDAAMKA muuqataa ME la mid ma aha sida aan ka arki GOOGLE. GOOLE WAXAA LAGA QAADAY DADKA KA QAYBGALAANSHO DEGAANKA BUKAANKA. Su'aal:
SIDA LOO OGTAHAY EE keeno EE ISKU MID YAHAY markaas u muuqataa sarreeya NIDAAMKA arkay GOOGLE?
WAXAAD ADIGA KA QAADAY.
Waa hagaag, sharaxaad mid ka mid ah xariiqyada kooban:
Tan waxaa lagu sameeyaa qalabka Excel2GoogleEarth
1 Waa inaad lahaato isku-duwayaal, dabcan, oo noqon kara tusaale ahaan X = 667431.34 Y = 1774223.09
2 Waxaad ku gashaa fayl heer sare ah, saf khaas ah (waxay noqon karaan dhowr)
3. Kicin barnaamijka
4. Halkaas waxaad gashaa meesha ay isku-duwani yihiin, iyo raxmadda (hadday tahay woqooyi ama koonfur)
5 badhanka dhanka midig ee "data" waxaad dooranaysaa unugyada xaashida sare halka aad ku leedahay iskuduwaha
6. Waxaad tilmaamaysaa amarka, haddii ay yihiin ugu horeyntii x, ka dibna waxaad oran kartaa bariga, waqooyiga
7 markaa waxaad tilmaamaysaa meesha aad rabto faylka kml ee la keydiyo
8 Markaad riixdo badhanka ok, faylka ayaa la abuuri doonaa.
Si aad uga aragto dhulka google, waxaad samayn kartaa faylka, furan oo fiiri faylkan kml.
hodan isagu wuxuu leeyahay:
HELLO, WAXAAN U BAAHAN YAHAY IN AAD U BAAHAN YAHAY IN AAD U DHAGEYSO UTM COORD COORDINATES GOOGLE EARTH
Hi Richy Xiriirintan leeyahay boosto loo qoondeeyay isticmaalka qalab loogu talagalay.
Haddii, ka dib markaad aragto, waxaad shaki qabtaa, waad i siisaa.
HELLO, WAXAAN U BAAHAN YAHAY MAGAALADA METHODOLOGY, SIDA AAD U KALA DUWAN KARAA UTM QIIMAHA GOOGLE AH EE GOOGLE
Anigu ma arag arjiga taas oo sameeya, waxaa jira mid ka mid ah muujinaya khariidadaha google, boostadan aan ka hadlo
lda isagu wuxuu leeyahay:
Sideen u heli karaa curqaha heerarka Google Earth?
Waan hubiyay, laakiin marka laga reebo in la i siiyo macluumaadka shaashadda, ma dhoofi karo si aan ugu dhejiyo Cad ama Excel, macluumaadka kootada weli wali lama dhoofin karo.
Waxaan kuugu mahadcelinayaa xaalad kasta oo ah qalabka kale ee aad iigu tilmaamtay aniga, maxaa yeelay waxay hubaal ahaan ii noqon doonaan kuwo aad iiga faa'iido leh waqti kale.
Waxaan sii wadi doonaa inaan raadiyo macluumaad kale oo aan halkaas ka joogo.
Waxa aan ogahay waa in 3D 2008 Civil Software ka timaada Autodesk kuu ogolaanaya inaad hesho garoomada heerarka dhabta ah ee muuqaalka Google Earth oo qaabeeya dusha dhulka si aad u mashquuliso.
Haa, hadda waxaan fahamsanahay, waxaan u maleynayaa in tani ay kuu fiicantahay inaad adeegsato adeegga hey'addaha, kaliya ma aha in uu ku ordo dhulka google laakiin uu khariidado google ah, iskuday ... Waxaan arki doonaa haddii aan baaro si kale
Halkan waxaa ah macluumaadka hey'adda hey'adda
Waan sharaxayaa. Waxaan raadinayaa marin kasta oo ku yaal dusha Google Earth. Waxaan ku kaydin doonaa sida * .kml, laakiin marka la badalo barnaamijyada la tilmaamay si loo helo isku-duwidda waddooyinka, kuwani waxay ka muuqdaan Iskuduwaha Juqraafiga (Latitude, Longitude) iyo 0. Waxa aan u baahanahay waa in ugu yaraan la helo feylka cabbirrada lagu muujiyay shaashadda Google Earth markaan u wareego sawirka sawirka.
Aynu aragno haddii aad naftaada u sharraxdo inuu ku caawiyo. Xogta aad haysaan ee kumeelgaarka ah ee aad ku haysaa? See tahay Miyuu ku yaal shaashadda Google Earth mise si kale miyaad ku heshay?
Thanks, laakiin dhibcaha la dhoofiyay ayaa ku jira isku-duwidda juqraafi (Latitude, Longitude) iyo cabbirku aanu muuqan. taas oo ah waxa aan u baahanahay.
Isla waxay la mid tahay Excel, halkaas oo kaliya dhibco guri oo muuqda, oo leh cabbirka 0.
Waa hagaag, waxa ugu horreeya waa in la sameeyo faylka kml, waayo waxaad ku sameyn kartaa qalabyada barnaamijku leeyahay, ha noqdaan dhibco ama jidad.
ka dibna u keyd sida faylka kml
si aad u soo dejiso isku-duwayaasha aad ka beddeli kartid kml ilaa sare, autocad, arcview ama gps
ee boostadan waxaan ku tusayaa codsiyada qaar ee sameeya tan
Sidee ayaan uga soo guurin karaa Google Earth ee isku-duulimaadyada gadaal oo aan ku soo raacay shaashadda?
Hi Sarahí, waan kugula talinayaa
Waxaad ku qori kartaa faahfaahinta macaamiisha ah, ka dibna barnaamijku wuxuu abuuraa faylka kml.
Waxaan kuugu digayaa in ay ku siin karto dhibaatooyin haddii amaanka macruufka sare uu sarreeyo, waayo waxaad aadi kartaa qalabka, ikhtiyaarrada, amniga, amniga makrurrada, waxaadna dhigeysaa midka ugu hooseeya
ka dibna keyd file faylka, ka bixida iyo dib-u-laabo
Sarahí Pacheco isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan u baahanahay in la sameeyo qaar ka mid ah wadataa on Google Earth in lagu muujiyo duur muunadda shaqada a ... Waxaan leeyahay wadataa, laakiin aan sida si ay u helaan sax ah Google Earth ... wadataa waa in UTM ... Waxaan dhihi kara haddii aad ka dhigi kartaa wadada a si gaar ah raadinayso wadataa UTM? ? ... Mahadsanid!
Hello Ernesto, shuruudaha ugu hooseeya ee google waa Windows 2000, iyo xiriirka ayaa loo baahan yahay (ugu yaraan xNUMX kbps), ugu yaraan si loo soo dajiyo oo loo soo dajiyo macluumaadka online.
Shabakad aad u yar oo deg deg ah ayaa deyn u noqon karta macluumaadka ugu qiimaha badan ee la soo bandhigo marka aad u dhowdahay ama ka baxayso ... oo tani waxay ku xiran tahay oo keliya.
fadlan ii sheeg sida loo soo dejiyo ama loo dhiso jardiinooyinka dhulka google ee aan ka shaqeyno iyada oo aan ku xirnayn internetka iyo haddii ay jirto woxoogaa ah win98